लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल पुनः विस्तार, कसले कुन मन्त्रालय पाए ? Canada Nepal
लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल पुनः विस्तार, कसले कुन मन्त्रालय पाए ?
रुपन्देही - लुम्बिनी प्रदेशमा सोमबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति भएपछि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आज दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
उनले शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्रीमा कल्पना पाण्डेलाई र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीमा सुमन शर्मा रायमाझीलाई नियुक्त गरेका छन् ।
शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएकी पाण्डेलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए ।
त्यस्तै राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रायमाझीलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले शपथ गराएका हुन् । सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्रीसहित नेकपा (एमाले)का ३ जना र जनता समाजवादी पार्टीका राज्यमन्त्रीसहित ४ जना रहेका छन् ।
बैशाख २०, २०७८ सोमवार २०:४२:२३ बजे : प्रकाशित